Fitiavana tsy mahafantatra ny fetra Archive - Zon'olombelona & Light Art avy amin'ny Fondation PixelHELPER
Ny fitiavana dia tsy misy fetra
25 Enga anie 2013
Avy amin'ny Avana - zavakanto mampifandray ny tetezana
Fandanjalanjana dia fihetsika mandanjalanja amin'ny avana.
"Avy amin'ny Avaratra"
Ny hazavana tsy misy fijerin'ny avana iray dia namirapiratra ny Asabotsy hariva tao amin'ny lapan'ny tanànan'i Düsseldorf manerana ny tanàna.
Ny fanentanana “From the Rainbow” Ny PixelHELPER dia mijoro amin'ny fandeferana bebe kokoa ary manohitra ny fankahalana.
Ny avana manome marika fanantenana sy fahatanterahana. Rehefa mahita avana ny olona dia zavatra iray no azo antoka: maizina sy orana tsy mitana ny teny farany.
Tetikasa hazavana "Avy amin'ny Anaranao" nosoratan'i Oliver Bienkowski dia tetikasa mitohy izay hanamboarana ireo tetezana, trano ary maritrano maritrano izay novana ho tetezana avana antsoina hoe avana. Hatreto, ny tetezana Karl Branner any Kassel dia naverina ho novolavolaina ihany koa ho an'ny tetezana seranan-tsambo ao amin'ny seranan-tseraseran'i Düsseldorf. Nisara-bazana ny olona tao amin'ny Documenta ity tetikasa ity ary namorona fisintonana mafy an'ireo mpitsidika zavakanto iraisam-pirenena. Ny vavahady Brandenburg koa dia nivadika ho avana ho an'ny Fetin'ny Jiro. Kasseler Bergpark Kaskaden, fanta-daza amin'ny UNESCO World Cultural Heritage, dia efa nandoko avana. Amin'izany, ny mpanakanto dia manentana bebe kokoa amin'ny fandeferana & manohitra ny fankahalana.
Avy amin'ny Avana - zavakanto mampifandray ny tetezana Enga anie 6th, 2020Oliver Bienkowski